Taorian’ny hetsiky ny mpianatra: voaroba ireo mponina sy ireo mpivarotra eny Vontovorona | NewsMada
Mahatsiaro ho lasibatra ka mitaraina noho ny fandrobana ny entana sy ny fananany ireo mpivarotra sy ny mponina eny Vontovorona, taorian’ireny hetsiky ny mpianatra nisesisesy ireny.
Nisy indray ny fihetsiketsehana nataon’ireo mpianatra teny Vontovorona, ny 2 marsa 2021 noho ny tsy fahafalian’izy ireo momba ny vatsim-pianarana. Toy ny mahazatra, nisy ny fandorana kodiarana sy fanaovana sakana teo am-pidirana ny vavahadin’ny toeram-pianarana. Fotoana fohy taorian’izay, nidina teny ny mpitandro filaminana nandrava ireo sakana nataon’ny mpianatra. Nitaraina ireo mponina sy mpivarotra manodidina eny Vontovorona noho ny fahasimban-javatra nateraky ny fihetsiketsehana. Nilaza kosa anefa ireo mpianatra fa tsy avy amin’izy ireo ny fisian’ireo olona nandroba sy nandoro ireo toeram-pivarotana sasany manodidina an’i Vontovorona. Raha ny zava-nisy teny an-toerana, omaly, nikatona avokoa ireo toeram-pivarotana rehetra eny Vontovorona. Manoloana ny fihetsiketsehana miseholany isaky ny misy fitakiana ataon’ny mpianatra, nitaraina ireo mponina sy mpivarotra fa lasibatra hatrany izy ireo ka mangataka amin’ny tompon’andraikitra mba hijerena akaiky ity raharaha ity.
“Tsy avy aty aminay ireo mpandroba…”, hoy ireo mpianatra.
“Any amin’ny fanjakana izy ireo no tokony hanao ny fitarainana ary tsy tokony hanapotika entan’olona”, hoy ireo mpivarotra voaroba. Manaitra ny tompon’andraiki-panjakana koa ireo mponina sy mpivarotra mba hijery akaiky ity olana mianjady amin’ny mpianatra ity mba hamalian’izy ireo faran’izay haingana ny fangatahana mba hialana amin’ny fihetsiketsehana toy izao, izay misy fiantraikany amin’ny fiainan’ireo mponina sy mpivarotra. Nanamafy kosa anefa ireo mpianatra fa tsy izy ireo no nanao ny fandrobana fa misy ireo andian’olona manararaotra ny hetsika nataon’izy ireo. “Zonay ny mitaky ny vatsim-pianarana ary mpianatra hendry ny mpianatry ny politeknika fa mety nisy ireo olona manararaotra dia lasa misy tampoka ny fandrobana”, hoy ny fanazavan’ireo mpianatra.
Nisy ny fivoriana niaraka teo amin’ny ben’ny Tanànan’Alakamisy Fenoarivo sy ireo mpianatra nandinihana ity raharaha ity. “Lalaovin’ny olona ilay maha izy azy ny oniversite politeknika ka tokony harovana izany hasin’ny oniversite politeknika izany”, hoy ny ben’ny Tanànan’Alakamisy. Anjatony, araka izany, ireo mpivarotra manamorona ny oniversite. Tsy mbola nisy kosa ny fisamborana. Nanamafy rahateo koa ny avy amin’ny Emmo/Reg fa tsy maintsy mandray fepetra hatrany izy ireo rehefa misy ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka.